March 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
All Cracked Box Tools Android Tool Phone Application
Octoplus Box Crack Version 1.6.5 100%
Maung Pauk at 11:36:00 PM 0
Octoplus Box Crack Version 1.6.5 100% ပတ်သက်ပြီး Samsung တွေ IMEI ရေးတဲ့အကွက်မှာ မှိန်နေပါတယ်.... တော်တော်များများ လင့်တွေက အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ်... အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Box Crack ကတော့ 100% အလုပ်လုပ်ပါတယ်.... Software ကို install လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုလည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....
ပထမဦးဆုံး install_octoplus_octoplus_Samsung_1.6.5.exe ဖိုင်လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Box တစ်ခုတက်လာရင် Yes ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် OK ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Next ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် I accept the agreement ကို အမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် I have read and accept the above agreement ကို အမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် C:\_Program Files \_Octoplus|Octoplus_Samsung လမ်းကြောင်းကို မှတ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် Next ကို နှိပ်ပါ။
၂ကွက်စလုံးမှာ အမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Install ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
Install လုပ်နေပါလိမ့်မည်။ ခဏစောင့်ပေးပါ။
ပြီးသွားရင် Finish ကို နှိပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Loader.exe ဖိုင်လေးကို Copy ယူပါ။
မိမိရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ Octoplus Samsung Tool လေး သွားပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
သွားပေါ်နေတဲ့ Octoplus Samsung Tool လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Properties ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် နောက် Box တစ်ခုတက်လာရင် Open File Location ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Open File Location ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဒီလင့်ထဲ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ C:\_Program Files\_Octoplus\_Octoplus_Samsung အဲအထဲရောက်သွားရင် ခုနက copy ယူထားတဲ့ Loader.exe လေးကို ထည့်လိုက်ပါ။
Copy ထည့်ပြီးရင် Loader.exe ဖိုင်လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Properties ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Run this program as an administrator ကို အမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး Apply ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Loader.exe လေးကို Click ၂ချက်ခေါက်ပြီး ဖွင့်လို့ရပါပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလို Box တက်လာရင် Octoplus box လေးကို box မရှိဘဲနဲ့ သုံးလို့ရပါပြီ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့နေရတဲ့ Octoplus box crack တွေဟာ Samsung Phone တွေ IMEI ရေးတဲ့အကွက်က မှိန်နေပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Box Crack ကတော့ မမှိန်ဘဲ သုံးလို့ရမည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Rar Password = xiaomisamsungbasicadvancebook
Credit : Aung Min Han
Download Octoplus Box Crack Version 1.6.5 : 102.05 Mb
Gmail and Gtalk Tech News
ချက်တင်းဘိုးအေ Gtalk ကလေးလည်း ဇာတ်သိမ်းရရှာပြီ
Maung Pauk at 10:56:00 PM 0
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Instant Messaging ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Google ရဲ့ လူသိများထင်ရှားခဲ့တဲ့ ဆားဗစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် ချက်တင်းတွေရဲ့ ဘိုးအေ လို့ ထင်ရှားလှတဲ့ Google Talk တဖြစ်လဲ Gtalk ကို သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရပ်နားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Google ဟာ သူရဲ့ ဘလော့ထဲမှာ ဒီသတင်းကို ၀မ်းနည်းခြင်းများစွာနဲ့ ကြော်ငြာချက်ထုတ်ခဲ့ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Google Allo နဲ့ Duo တို့ မထုတ်လုပ်ခင်ကတည်းက အခု လို ရပ်နားဖို့ အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပေမယ့် Gmail ထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့ Gtalk ဆားဗစ်တွေ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့အတွက် အခုလောက်အထိ အချိန်ကြာမြင့်သွားရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Gtalk ဟာ အပြီးတိုင် ဇာတ်သိမ်း သွားတာ တော့ မဟုတ်ဘဲ အရင်လို Global Chat ဆော့ဖ်ဝဲလ် အဖြစ်မရှိတော့ပေမယ့် Google Handouts နဲ့ Google ရဲ့ တခြား ဆားဗစ်တွေမှာ Add-ons တစ်ခု အနေနဲ့ ပြန်လည် တည်ရှိသွားဦးမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ Google Talk ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ Google Hangouts ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ အဆင်မြှင့်တင်ခဲ့တဲ့ ၁ ကြိမ်ကလွဲလို့ Google Talk ကို အားလုံးပဲ မေ့လျော့နေခဲ့ကြတာ ၅ နှစ် ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အခု အချိန်မှာတော့ Web နဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေ က အပြိုင်အဆိုင် အားကောင်းလာပြီး ကနဦး Chatting ဆော့်ဖ်ဝဲလ်တွေမှာ စီနီယာကျခဲ့တဲ့ Gtalk ကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ Beetalk, wechat, Facebook messenger တို့လို IM software ပေါင်းမြောက်များစွာ ထွက်ပေါ်နေရာယူခဲု့ပါတယ်။ လှုမှုကွန်ယက်တွေမှာ နေရာဦးဖို့ နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် Gtalk ကို ပိတ်သိမ်းဖို့ Google က စဉ်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Gtalk လိုမျိုးပဲ Gmail ထဲမှာ ရှိတဲ့ စမ်းသပ်ဆဲ၊ လုပ်ဆောင်ဆဲ Labs တချို့ကိုလည်း ရုတ်သိမ်းဖို့ ရှိနေတယ် လို့ ဂူးဂဲလ် က ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ သက်တမ်း ၁၂ နှစ်တိုင် တည်ရှိခဲ့တဲ့ Chatting လောကရဲ့ အထင်ကရ Gtalk ဟာ နိဂုံးချုပ် ဇာတ်သိမ်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်..
Ref : Googleblog
Myartko Orange ရဲ့ ပို့စ်ကို အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်သည်..
Windows 8 Windows ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ
Windows 10 တင်တဲ့အခါ Hard Disk တွေ Dynamic ဖြစ်နေလို့ တင်လို့မရခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခု
Maung Pauk at 11:52:00 PM 0
Windows 10 တင်တဲ့အခါ Hard Disk တွေ Dynamic ဖြစ်နေလို့ တင်လို့မရခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. Hard Disk တွေ Dynamic ဖြစ်နေတဲ့အခါ Format လည်းချလို့မရတော့သလို Windows ကိုလည်း အတင်မခံတော့ပါဘူး.. အဆင်ပြေ စမ်းသပ်ပြီး နည်းလမ်းလေး တစ်ခုပါ...
1. Windows ခွေ သို့မဟုတ် Stick ကိုထည့်ပြီး Boot ခေါ်ပြီးတဲ့အခါ Language ရွေးတဲ့အဆင့်ရဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ Install Now ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရင် Repair your computer ကိုနှိပ်ပါ..
2. Troubleshoot ကိုနှိပ်ပါ..
3. Advanced Options ကိုနှိပ်ပါ...
4. Command Prompt ကိုနှိပ်ပါ..
5. Computer က Reboot ကျပြီး ပြန်တက်လာပါမယ်.. အဲဒီမှာ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာရဲ့ နာမည်ကို မြင်ရပါမယ်.. အဲဒါကိုနှိပ်ပါ.. Password တောင်းတဲ့အခါ ကိုယ့် Password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ...
6. Command Prompt ထဲကိုရောက်လာပါပြီ.. command တစ်ခု ရိုက်ပါမယ်.. diskpart လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..
7. DISKPART ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. list disk လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ.. ( list နဲ့ disk ကြားမှာ space တစ်ချက် ခြားပါတယ်..)
8. ကိုယ့်စက်မှာ တင်ဆင်ထားတဲ့ HDD စာရင်းကိုဖေါ်ပြပေးပါတယ်.. HDD တစ်လုံးတပ်ထားရင် Disk0နဲ့ဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး တစ်လုံးထက်ပိုရင်တော့ Disk 1, Disk2စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.. Windows တင်ဖို့တွက် ပုံမှန်အားဖြင့် Disk0သာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ပြတဲ့စက်မှာက Disk တစ်လုံးသာ တပ်ထားတဲ့အတွက် Disk0ပြနေပါတယ်.. အဲဒီ HDD ကိုရွေးဖို့ Command တစ်ခု ရိုက်ရပါမယ်.. select disk0လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ.. ( select နဲ့ disk ကြားမှာ Space တစ်ချက်၊ disk နဲ့0ကြားမှာ Space တစ်ချက်စီခြားပါတယ်)
9. Disk0is now the selected disk ဆိုပြီးပြပါတယ်.. Disk0ကိုရွေးပြီးသွားပြီးပေါ့.. Command ဆက်ရိုက်ပါမယ်.. ရိုက်ရမယ့် Command က clean ဖြစ်ပါတယ်.. clean ရိုက်ပြီးရင် Enter တစ်ချက် ခေါက်ပေးလိုက်ပါ...
10. DiskPart succeeded in cleaning the disk လို့ပေါ်လာရင် ကိုယ့် HDD ကို Clean လုပ်ပြီးပါပြီ... exit နဲ့ထွက်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း Windows ပြန်တင်နိုင်ပါပြီ...
Ubuntu 17.04 Zesty Zapus Final Beta
Maung Pauk at 11:48:00 PM 0
Ubuntu ချစ်သူ Linux User များအတွက် Ubuntu 17.04 Zesty Zapus Final Beta ထွက်လာပါပြီ..
New features in Ubuntu 17.04
Lots of fixes and patchesNew install usesaswap file instead ofaswap partition
gconf no longer installed by default
Updated default apps like Firefox, Thunderbird, and LibreOffice
Now 32-bit PowerPC support
Mesa 17 and X.org Server 1.19
Release Page : http://releases.ubuntu.com/17.04/
Download Ubuntu 17.04 Final Beta
For 64bit (AMD 4)
For 32bit (i386)
Android Tool Phone Application
Miracle Box Crack 2.27A Just Double Click
Maung Pauk at 11:39:00 PM 0
Miracle Box Crack 2.27A လေးပါ.. Double Click ခေါက်ရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..
Download Miracle Box Crack 2.27A: 83.4 Mb
Miracle Box Crack တွေ Start ကိုနှိပ်လို့မရခဲ့ရင် ဖြေရှင်းဖို့ MiracleBox Start Button Fixer
Maung Pauk at 11:29:00 PM 0
ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်လို့ရလာတဲ့ exe ဖိုင်ကို Rename လုပ်ပြီး _maungpauk ကိုဖျက်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Run As Administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ.. MiracleBox Start Button Fixer ဆိုတဲ့ Tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ဖျက်ရမယ့် ဖိုင်လေးကို ညွှန်းပေးထားပါတယ်.. ဖျက်လိုက်ပြီး Fix Start Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. အဆင်ပြေသွားပါပြီ...
MiracleBox Start Button Fixer : 2.06 Mb
Android Tool Phone Application နည်းလမ်းများ
Vivo ​Y22, Y15, MTK တွေ baseband unknown 100% အဆင်​​ပြေတဲ့နည်း
Maung Pauk at 11:02:00 PM 0
Vivo ​Y22, Y15, MTK တွေ baseband unknown 80 pes အဆင်​​ပြေတဲ့နည်း လေးပါ.. root လည်းမလိုပါဘူး..
Flashtool နဲ့ write memory ပြန်​​ရေးပါ
flashtool မှာ welcome ကိုသွား...
pc မှာ ctrl+Alt+v ကိုတွဲနှိပ်​ advance mode ဆိုတာ​လေး​ပေါ်လာမည်​.. ​
ပြီးရင်​ window ထဲက write memory အမှန်​ခြစ်​..
ပြီးရင်​ scatter file ကို note+++ နဲ့ဖွင့်​ nv ram ​အောက်​က
linear start addr ​ဘေးက ဂဏန်း​တွေကို copy ကူး
Flashtool က Begin Address [Hex] မှာကူးထည့်​ file path မှာ scatter file ကို​ရွေး
write Memory ကိုနှိပ်​...
အစိမ်း​ရောင်​ အ၀ိုင်း​လေးတက်​လာပြီok လို့ပြရင်​ရပြီ ပါဝါဖွင့်​ကြည့်​လိုက်​​တော့ imei , baseband ​ပေါ်လာမည်​
ပြီး factory reset ချ 0k.........Credit to All .
Credit : Kyaw Zay Myint
MTK နဲ့ Qualcomm Smartphone တွေအတွက် Tool အလန်း AFTool 4.8.0
Maung Pauk at 8:00:00 AM 0
MTK တွေ Firmware တင်ဖို့ FlashTool အသစ် နဲ့ Qualcomm တွေ Firmware တင်ဖို့ Flashtool အသစ်တွေကို Tool တစ်ခုတည်းမှာ ပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့အပြင် MTK နဲ့ Qualcomm Smartphone တွေအတွက် Function တွေ တော်တော် စုံစုံလင်လင်ပါရှိပါတယ်.. Mobile Phone Service သမားတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool အလန်း တစ်ခုပါ..
Install လုပ်တဲ့အခါ Password တောင်းခဲ့ရင် www.shoujiweixiu.net ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ.. zip ဖိုင်ထဲမှာလည်း Notepad နဲ့ ထည့်ပေးထားပါတယ်..
Download AFTool 4.8.0 : 78.9 Mb
Android Tool Huawei Phone Application
Huawei ဖုန်းများ Bootloader Unlock Code တောင်းရခက်ခဲနေသူများအတွက် OMH Huawei Bootloader Unlocker Tool
Maung Pauk at 7:45:00 AM 0
9008/9006 Mode ကနေ Huawei ဖုန်းများအား Bootloader Unlock ကို One Click နဲ့ Unlock လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ.. တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် Partition မတူညီရင် Firmware ကျတတ်မှာမို့
Firmware လေးတော့ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. Honor 4x နဲကတခြား Model တော်တော်များများအဆင်ပြေလို့ ထုတ်လုပ်ပီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
OMH Huawei Bootloader Unlocker အားအောက်တွင်ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မှတ်ချက် - Install မလုပ်ခင် Antivirus များပိတ်ထားပေးပါခင်ဗျာ
File Size - 4MB
Rar Pass - omh
Developed By - Omh Min Htet
Credit : Omh Min Htet
Download OMH Huawei Bootloader Unlocker Tool(Beta): 4.36 Mb
Android Tool Oppo Phone Application
Maung Pauk at 1:17:00 AM 0
Oppo CustomerServiceTool (OPPO special after-sale tools) တစ်ခု တွေ့လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Oppo နဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေအများကြီးပါ.. ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး.. :D.. ကိုယ်တိုင်သာ စမ်းကြည့်ကြတော့နှော..
Download Oppo CustomerServiceTool : 34.1 Mb
MTK တွေအတွက် DownloadTool 1612.8
Maung Pauk at 11:41:00 PM 0
MTK တွေအတွက် DownloadTool တစ်ခုတွေ့လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကြည့်ရတာ Function တွေတော့ အတော်စုံနေတာပဲ.. အသုံးပြုနည်းကတော့ မသိဘူး.. ကိုယ်တိုင်သာ စမ်းကြည့်ကြပေတော့ဗျို့...
Red : GSM Developers
Download DownloadTool 1612.8 : 7.83 Mb
Xiaomi တွေရဲ့ Lock တွေကို ဖြည်ပေးနိုင်မယ့် MAD Unlock Tool
Maung Pauk at 11:08:00 PM 0
MyanmarAndroidDevelopment က ရေးတဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါ.. Xiaomi တွေရဲ့ Lock တွေကို ဖြည်ပေးနိုင်ပါတယ်..
Features တွေကတော့ -
Unlock Screen (adb mode + root )
Unlock Screen ( Recovery sideload mode )
Xiaomi Bootloader Unlock ( Fastboot mode )
Xiaomi Mi Account Remove (Fastboot mode )
Mi Account Remove (9008)
Mi Account Remove (fastboot)
ဒါ့အပြင် Other Option ထဲကနေ -
Fastboot Mode/ Adb Mode ကနေ Scan လုပ်ပေးနိုင်မယ်၊
Xiaomi အတွက် Silode mode/ fastboot mode ကနေ Scan လုပ်ပေးနိုင်မယ်၊
COM port ကို Scan လုပ်ပေးနိုင်မယ်၊
Reboot ကိုလည်း Recovery/Fastboot/9008 တွေဆီရောက်အောင် Reboot လုပ်မယ် စတဲ့ Function တွေကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်..
Install လုပ်တဲ့အခါ Password တောင်းရင် MyanmarAndroidDevelopment ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ..
Credit : သက်ထွေးအောင် ( MAD )
Download MAD Unlock Tool : 1.83 Mb
Computer Knowledge Knowledge
NET Framework ဆိုတာဘာလဲ ?
အဲဒီအကြောင်းမပြောခင် Microsoft အကြောင်း အရင်စပြောချင်ပါတယ်.. .NET Framework အကြောင်း သူကစမှရမှာမို့ပါ..
.NET Framework ကိုစတင်ရေးသားခဲ့တာ Microsoft Company ဖြစ်ပါတယ်…
Net ဆိုတာ Microsoft ကနေ Software Application တွေ၊ Web Service တွေကို Develop လုပ်လို့ရအောင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ Platform ပါ။ အဲဒီ .Net က Programming Language အမျိုး ၂၀ လောက် ကို Support လုပ်ပါတယ်။ Dotnet က Support လုပ်တဲ့ထဲမှာ Microsoft Language တွေဖြစ်တဲ့ (C#.Net, VisualBasic.Net, C++.Net, Jscript.Net,ASP.Net ) တို့အပြင်တစ်ခြား Third Party Language တွေဖြစ်တဲ့ (Component Pascal(QUT), COLBOL, Fortran, Pearl, Python) အစရှိတဲ့ Language တွေကိုပါ Support လုပ်ပါတယ်။
အခုပြောတာက .NET အကြောင်းပါ… .NET Framework အကြောင်းမဟုတ်သေးပါဘူး.. ဒါအစပေါ့
.NET Frameworkဆိုတာ Microsoft.NET ရဲ့ Language တွေကို အသုံးချတဲ့ Fundation ဖြစ်ပါတယ်.. C#.NET, VB.NET စတဲ့ Language တွေဟာ တကယ်ဆိုရင်
သူ့တစ်ယောက်တည်း ဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး… သူတို့က Keywords တွေ Class တွေသာဖြစ်ပါတယ်.. Keyword ဆိုတာ .NET Framework နဲ့တွဲရေးမှသာ
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Programs ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်…
Microsoft .NET Framework ဆိုတာ Microsoft Windows operating systems တွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ software technology တစ်ခုပါပဲ။ သူ့အထဲမှာ ဘာတွေ ထည့်သွင်းရေးသားထားသလဲ ဆိုရင် ပုံမှန် programming ပြဿနာရပ်တွေအတွက် အဖြေထုတ်ထားပြီးသား Code တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် framework တစ်ခုတည်းအတွက် သီးသန့် ရေးသားထားတဲ့ programs တွေ windows ထဲမှာ execution လုပ်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ virtual machine တစ်ခု အနေနဲ့ .NET Framework ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး .NET Framework ဆိုတာ Windows platform တွေအတွက် applications အသစ်တွေ ဖော်ထုတ်ကြတဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် Microsoft ကနေ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ software framework တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုချုံး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ flash animations တွေ ကြည့်နိုင်ဖို့ဆို Adobe Flash Player တင်ရတယ်။ Java Programs တွေ run နိုင်ဖို့ဆို Java Runtime တင်ထားဖို့လိုတယ်။ အဲလိုပဲ .NET Framework လိုအပ်တဲ့ programs တွေ အတွက်လည်း Microsoft .NET Framework install လုပ်ဆောင်ထားပြီးသား ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
.NET Framework က Windows Server 2008 နဲ့ Windows Vista -7မှာ ထည့်သွင်းပါဝင်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် Versions နိမ့်တာ မြင့်တာလေးတွေ လောက်ပဲ ကွာခြားချက် ရှိပါတယ်။ Windows XP မှာတော့ Windows Updates ပေးမထားဘူး - ကိုယ်တိုင်ကလည်း installed လုပ်ဆောင်မထားဘူးဆိုရင် .NET Framework က စက်ထဲမှာ ရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး - လောလောဆယ် ထုတ်ထားပြီးတဲ့ .NET Framework current version က .NET Framework 4.0 ပါ။ တစ်ခြား ထုတ်ထားပြီးတဲ့ .NET Framework versions တွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ (1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 နဲ့ 4.0)။ တစ်ခါတစ်လေမှာ users တွေ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်စက်မှာ ဘယ် .NET Framework versions တွေ သွင်းထားပြီးမှန်း သတိမထားမိကြတာ တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်စက်မှာ ဘယ် .NET Framework versions တွေ သွင်းထားပြီးပြီ လဲဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်နည်းကတော့ Control Panel > Add or Remove Programs ကနေ စစ်ဆေးတဲ့ နည်းပါ။
Credit : Today's Latest
CCleaner Any Version PRO
Maung Pauk at 12:46:00 AM 0
CCleaner ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ Software တွေ အသုံးပြုလို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. သာမန်အားဖြင့် Software ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမှိုက်တွေကို သန့်ရှင်းဖို့ Windows စနစ်မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တစ်ခုချင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်တော့ သာမန်လူအတွက် သိပ်အဆင်ပြေပါဘူး.. ဒါကြောင့် Third-party Software တွေကို အသုံးပြုရပါတယ်.. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ CCleaner ကီးတွေဟာ CCleaner နောက်ဆုံးထွက် ဘယ်ဗားရှင်းကို မဆို Pro Version ဖြစ်အောင် Activate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. အင်တာနက်ကိုပိတ်၊ CCleaner ကို Run.. Option > About ကိုနှိပ်ပြီး နာမည်ဖြည့်၊ ကီးဖြည့်ပြီး Activate လုပ်နိုင်ပါပြီ...
CCleaner is the number-one tool for cleaning your Windows PC. It protects your privacy online and makes your computer faster and more secure. Easy to use andasmall, fast download. Piriform releases regular updates for CCleaner with many improvements.
Download Latest CCleaner.exe
Ye Naing at 9:37:00 AM 0
NEED TO KNOW ADB . . .
Downloader Oppo OPPO FIRMWARES PC Software
OPPO MM OFFICIAL ROMS
Ye Naing at 9:33:00 AM 0
Windows 10 တင်တဲ့အခါ Hard Disk တွေ Dynamic ဖြစ်နေလ...
Miracle Box Crack တွေ Start ကိုနှိပ်လို့မရခဲ့ရင်ေ...
Vivo ​Y22, Y15, MTK တွေ baseband unknown 100% အဆင်...
MTK နဲ့ Qualcomm Smartphone တွေအတွက် Tool အလန်း AF...
Huawei ဖုန်းများ Bootloader Unlock Code တောင်းရခက်...
Xiaomi တွေရဲ့ Lock တွေကို ဖြည်ပေးနိုင်မယ့် MAD Unl...